घर युरोपियन स्टार Pedro Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'सुबिधा'। हाम्रो पेडोरो Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहीले पेडोरो रोरेग्युजज जीवनीको बारेमा सोचेको छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu को बिना, सुरु गर्न।
Pedro Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
पेडोरो एलीएजर Rodríguez Ledesma स्पेन मा सांता क्रुज डी Tenerife मा आफ्नो आमा, मोर्सर्रात लेडिमामा Encinoso र पिता, जुआन एन्टोनियो Rodríguez पेडोरो द्वारा 28 जुलाई को 1987th मा जन्म भएको थियो।
पेडोरो उनको आमाबाबुको एकमात्र बच्चा हो। उहाँ कहिल्यै खराब बच्चाको प्रकार थिएन।
पेडोरो राम्रो तरिकाले प्रशिक्षित र आमाबाबुसँग नजिकको सम्बन्ध थियो। स्कूल र खेलहरूको लागि राम्रो लैजानुपर्छ जवान बालकको लागि जीवनको लागि उत्कृष्ट सुरुवात थियो। उनले आफ्नो पुस्तक पढ्ने र साथीहरूसँग फुटबल खेल्दा सही सन्तुलन पाए।
पेडोरो फुटबलमा थोपा सुरु भयो (उमेर 16)। उनको युवा क्यारियर 2003 मा शुरु भयो जब उनले पहिलो सान आइसिड्रो अकादमी संग जुडे जहाँ उनले 2004 सम्म खेले।
2004 मा, तिनले ध्यान दिए FC बार्सिलोना अकादमी। पेडोरोले क्लबमा परीक्षण पूरा गरेपछि पछि क्याटलिन क्लब अकादमी प्रवेश गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो। उनले आफ्नो अध्ययन अकादमीमा जारी गरे र 2005 सम्म क्लबको युवा टोलीको लागि खेले।
वर्ष 2005 उनको लागि राम्रो तरिकाले चलाए जस्तै उनी एक व्यावसायिक अनुबंध पेश गरे जुन उनले हस्ताक्षर गरे र क्लबको तेस्रो टीममा एक स्थान थियो। 2005-2007 को बीच, पेडर्रो Rodríguez एक तेस्रो टीम मुख्य खेलाडी मध्ये एक बन्यो।
जवान स्पानीर्डको प्रभावशाली प्रदर्शनले उनलाई 2007 बाट सुरु भएको क्लबको दोस्रो टोलीको लागि खेल्न सक्षम बनायो जहाँ उनले अधिक गोल गरे।
2009 / 2010 मा, पेडोरो इतिहास को पहिलो खेलाडी बन्यो एक एकल वर्ष मा छ छह अलग क्लब प्रतियोगिताहरु को स्कोर, एक रेकर्ड केवल Lionel Messi द्वारा मिले जो यो 2011 मा मिला।
कुल मिलाएर, पेडोरोले बार्सिलोनाको पहिलो टोलीको लागि कुल 321 आधिकारिक खेल खेलेका छन्, 99 गोलहरू स्कोर गर्दै र अचम्मलाग्दो 46 सहयोग प्रदान गर्दछ जसका लागि 50% (25) मेसी गए।
बाकि भन्नुहोस्, अब इतिहास हो।
Pedro Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
पेडोरोको आमा, मोर्सर्रा लेडेसेमा एन्निनोसो र पिता, जुआन एंन्टोन Rodríguez इन्टरनेटमा उनीहरूको व्यक्तित्वको बारेमा धेरै कम जानकारी छन्।
सम्मानित स्रोतबाट रिपोर्ट तथापि उनीहरूले तान्त्रिक स्पेनिश शहर सान्टा क्रुज डे टिनेरिआ लोकप्रियतामा बस्छन् जुन प्रकृतिको शहर हो।
तिनीहरूले आफ्नो सर्वोत्तम पुत्र ल्याउने सबै भन्दा राम्रो तरिकाले राम्रो तरिकामा ल्याएको छ जसले वास्तवमा भुक्तानी गरेको छ। पेडोरोले आफ्ना आमाबाबुलाई हरेक चीजको आवश्यकतालाई प्रदान गर्दछ।
Pedro Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
पेडोरोको प्रेम जीवन अनुकरणको योग्य छ। उनले एक क्यारेक्टरको क्यालोराना मार्टिनसँग यसो भनिन् र तिनलाई भन्दा5वर्ष भन्दा पुरानो भनिएको छ। तिनीहरूले पेड्रो 17 हुँदा भेट्टाए। त्यस समयमा, केरोलिना 22 थियो।
पेड्रो Rodriguez लव स्टोरी
अन्य खेलाडिहरु लाई प्रेम गर्दछन्, राम्रो तरिकाले पड्रोले आफ्नो टाउकोमा रौतहटबाट राम्रो कारणहरु राखे। उनीहरूको सानो छोरो पछि वर्ष 2005 मा मायालु पक्षी दुवै विवाह भयो। तलको तस्वीरहरू उनीहरूको संघ देखाउँदै छन्।
Pedro वेडिंग फोटो
तल यो ठूलो फोटो हेर्नुहोस्। तिनीहरू आफ्नो कार संग एकैसाथ सुन्दर देख्छन्।
तल दम्पतीको अमीर बोडागा इनिसा शराबको चश्मा छ जुन पेडोरोको धेरै राम्रो मित्र र बार्सिलोनाको पूर्व साथीको स्वामित्वमा रहेको छ, एन्ड्रेस इनिस्टा.
उनीहरूले बच्चा जन्माउनुअघि 8 वर्षको बारेमा बास गर्ने निर्णय गरे।4अप्रिल 2013 मा दम्पतीले आफ्नो पहिलो छोरा, ब्रायन Rodriguez मार्टिन थियो।
पेडोरो रोड्रिजुजको परिवार
केरोलिना मार्टिन धेरै मायालु छ र उनको पतिको राम्रो हेरचाह लाग्छ। पेडोरो आफै मायालु पति हो र तिनको परिवारमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै पनि काममा संलग्न हुनुहुन्न। उनको मारियम जीवन साँच्चै ठूलो सफलता भएको छ। फेरि, तिनीहरू सँगसँगै सुन्दर देखिन्छन
पेडोरो रोड्रिजुज र पत्नी, केरोलिना मार्टिन
तिनीहरूको सम्बन्ध प्रेम, भरोसा र आपसी समझमा निर्भर छ। त्यसोभए, तिनीहरूले कहिल्यै अलगाव वा तलाकका बारे सोचेको छैनन। यो नोटमा उल्लेखनीय छ कि क्यारोलिना मार्टिनलाई डेनीला सिमाननको धेरै नजिकको मनोवैज्ञानिकता भनिएको छ जुन जो Cesc Fabregas यस लेख लेख्ने समयको रूपमा।
मानिसहरूको पेड्रोको निर्दोष वैवाहिक सम्बन्धको कदर गर्दा, यो पनि भन्न सकिन्छ Radamel Falcao, Nemanja Maticबरु, एडिंसन काभनी र adriano जसको वैवाहिक जीवन वैवाहिक मामलाहरु र विवादहरु संग चिह्नित छ।
Pedro Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -आफ्नो बचपन क्लब दिवालियापनबाट बचाउनुभयो
पेडोरोको बचपन क्लब, सान इस्इडोरोलाई दिईएको दिवालियापनबाट मुक्ति पाएको छ चेल्सी.
स्पेनको चौथो-स्तरीय टोली तेनेरिभले खेलाडीको स्थानान्तरणबाट € 420,000 लाई पार्यो चेल्सी, एक राशि जो आफ्नो वार्षिक बजेट देखि अधिक चार पल्ट (€ 85,000) छ।
पेड्रो थियो 10th स्पानीर्ड को अंग्रेजी प्रीमियर लीग मा चेल्सी एफसी को लागि कभी पनि खेल्नुहोस।
Pedro Rodriguez बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -शक्ति र कमजोरी
उनी खेलमा आफ्नो खुट्टा प्रयोग गर्छन् जसले उहाँलाई पिचको छेउमा खेलिरहेको बहुमुखी साबित गरेको छ।
उहाँ डिलबिलिङ खेलकुदमा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। त्यो खेलमा बलमाथि धेरै राम्रो नियन्त्रण छ। उनी निकै उत्साह र दक्ष भए जसले उनलाई लामो र छोटो रेंज दृश्यहरूको लागि गति र स्थितिमा प्रभावशाली र सराहना गरे।
पेडोरोको कमजोरी तिनको शीर्षक हो।
vannyhenrico - जनवरी 22, 2020
vannyhenrico - जनवरी 22, 2020 0
शाऊल नेग्युज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
फेब्रुअरी 26, 2019
Andreas Andreasensen बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
इवान रुकती बचपन कथा प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
डिसेम्बर 2, 2017
पिप Guardiola बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
एन्ड्रेस इनिस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
अक्टोबर 13, 2017